I-Menshevik neBolsheviks yayingamaqela phakathi kweRussia-Social Workers 'Party. Bajolise ekuveliseni iRevolution kwiRashiya ngokulandela iingcamango ze-socialist karl Marx . Omnye, amaBolsheviks, asebenzise amandla ngempumelelo kwiRussia Revolution ye-1917 , axhaswa ngokudibanisa kwe -drive ye-cold-hearted Lenin kunye ne-Mensheviks.
Ngowe-1898, iRussia Marxist yayilungiselele iRussia-Social Democratic Party Party; Oku kwakungekho mthethweni eRashiya ngokwawo, njengamanye amaqela ezopolitiko.
I-congress yayilungelelaniswa kodwa yayinabantu abathandathu abahlala kwiindawo zentlalo, kwaye abo babanjwa ngokukhawuleza. Ngomnyaka we-1903, i-Party yaqhuba inqungquthela yesibini ukuxubusha imicimbi kunye nezenzo kunye nabantu abangaphezulu kwama-50. Lapha, uLenin waxela ukuba iqela lidibanise kuphela abaguquleli beengcali, ukunika inzululwazi ingundoqo yengcali kunokuba i-massage of amateurs; wayechasene nendima ekhokelwa nguL. Martov, owayefuna umzekelo wobulungu obuninzi njengamanye, amaqela aseNtshona-ntshona-yentando yenkululeko aseYurophu.
Isiphumo sasihlula phakathi kweenkampu ezimbini. ULenin kunye nabalandeli bakhe bathola ininzi kwikomiti ephakathi kwaye, nangona yayininzi nje yesikhashana kwaye iqela lakhe lalingqongqo kwiqela elincinci, bazithabatha igama elithi Bolshevik, elithetha ukuba 'Lawa maqela.' Abachasene nabo, iqela eliholwa nguMartov, ngoko laziwa ngokuba yiMensheviks, 'Abo baMncinci,' nangona bebonke iqela elikhulu.
Oku kwahlukana kwakungabonakali okokuqala njengengxaki okanye ukwahlula ngonaphakade, nangona kuphazamise intlalo yoluntu yaseRashiya. Phantse kwasekuqaleni, ukwahlukana kwakuphelile okanye kukunye noLenin, kunye nezopolitiko ezakhelwe ngeenxa zonke.
I-Mensheviks yatsho ngokumelene neLenin yecala lokumisa, iqela lokunyanzelisa.
ULenin kunye namaBolsheviks baxela ukuba intlalo-ntle yi-revolution, ngelixa i-Mensheviks ixela ukuphinda iinjongo zentando yesininzi. ULenin wayefuna i-socialism ukuba ifakwe kwindawo esheshayo kunye neyodwa impinduko, kodwa i-Mensheviks yayikulungele-ngokwenene, yayikholelwa ukuba kuyimfuneko-ukusebenzisana namaqela aphakathi / amabhongeo ukudala umbuso wenkululeko kunye neengxowa-mali eRussia njengenyathelo lokuqala ukuya emva kokuhlaziywa kwezenhlalakahle. Bobabini babandakanyeka kwi-revolution ka-1905 kunye neSt. Petersburg Soviet, kwaye i-Mensheviks yazama ukusebenza kwi-Duma yaseRussia. AmaBolsheviks ajoyina emva kweDumas emva kokuba uLenin atshintshe intliziyo; Baye baphakamisa imali ngezenzo zobugebengu obukhulu.
Ukwahlukana kwiqela kwenziwe ngonaphakade ngo-1912 nguLenin, owakha iqela lakhe leBolshevik. Le nto yayincinci kwaye yahlukana nabaninzi baseBolsheviks ngaphambili, kodwa yabuyela ekuthandeni phakathi kwabasebenzi abaninzi abaye babona i-Mensheviks njengekhuselekile kakhulu. Ukunyuka komsebenzi kubone ukuvuselelwa ngo-1912 emva kokubulawa kwabantu abangamakhulu amahlanu abavukuzi ngokubhikisha kuMlambo iLena River, kunye namawaka okuhlaselwa okubandakanya izigidi zabasebenzi ezilandelwayo. Nangona kunjalo, xa amaBolsheviks echasene neMfazwe Yehlabathi I kunye nemigudu yaseRussia kulo, babesenza intlungu kwiintlangano zentlalo-ntlalontle, eyona nto yayinqume ukuxhasa imfazwe yokuqala!
Bobabini beBolsheviks kunye namaMensheviks babesebenza eRussia ekukhokeleleni, kunye neziganeko ze- February Revolution ka-1917 . Ekuqaleni, amaBolsheviks axhasa uRhulumente wexesha elizeleyo kwaye wayeqwalasela ukudibanisa nama-Mensheviks, kodwa emva koko uLenin wafika ekuthinjweni waza wagxininisa izimvo zakhe ngokucacileyo kwiqela. Enyanisweni, ngelixa amaBolshevik ahlaselwa ngamacandelo, kwakunguLenin owayehlala ephumelele kwaye enika isiqondiso. I-Mensheviks yahlula malunga nokwenzayo, kwaye i-Bolsheviks-kunye nenkokeli ecacileyo eLenin-yafumana ikhula ekuthandeni, ixhaswa yizikhundla zikaLenin malunga nokuthula, isonka kunye nomhlaba. Bafumana abaxhasayo ngenxa yokuba behlala bexhasayo, bechasene nemfazwe, kwaye bahluke kwi-coalition ebusayo eyabonakala ingaphumeleli.
Ubulungu beBolshevik bukhula ukusuka kumashumi amabini amawaka ngexesha lokuguqulwa kokuqala ukuya kwikota yesigidi ngo-Oktobha.
Bafumana amaninzi kwiSoviets eziphambili kwaye babesesikhundla sokubamba amandla ngo-Oktobha. Kwaye ... kwafika umzuzu obalulekileyo xa i-Congress yaseSoviet ifuna idemokhrasi yentando yenzululwazi, kwaye i-Mensheviks inomsindo kwiimpawu zeBolshevik zanyuka zaphuma, zavumela abaseBolshevik ukuba balawule baze basebenzise iSoviet njengengubo. Yilaba baseBolsheviks abaza kubumba urhulumente waseRashiya omtsha baze baguqulwe ibe yiqela elawulawula kude kube sekupheleni kweMfazwe yeCold , nangona yahamba ngeenguqu ezininzi zenguqu kwaye ichithe ezininzi zezona zintshintsho eziphambili. I-Mensheviks yazama ukulungelelanisa iqela lokuchasana, kodwa yachithwa ekuqaleni kwee-1920. Ukuhamba kwabo kwawabhubhisa.
Ixesha elizayo lilungelelaniso ngesiTaliyane
Sus2 kunye neeS44
Ukulungiselela Iimviwo zokugqibela